Nkwupụta ụda Smart Smart Tetanụ: Elekere mkpuchi, ọkà okwu nwere Alexa na Qi chaja | Akụkọ akụrụngwa
Nweghị ike ịbụ karịa ihe n'otu oge dị ka ngwaahịa a. N'ezie, ọ bụ ụzọ bara uru bara uru iji kpaa ụyọkọ ngwaọrụ anyị na-enwekarị na nkwụsị abalị anyị, mana naanị n'otu. Nke a bụ ngwaahịa jikọtara nke dọtara uche anyị na nke nwere ike ime ka ndụ dịrị anyị mfe. Anyị ga-enyocha Smart Ọkà okwu Wake Up si Energy Sistem, a smart mkpu elekere na a ọkà okwu na-ekwe nkwa ime ọtụtụ ihe. Nọnyere anyị iji chọpụta akụkụ ya kachasị adọrọ mmasị, omume ọma ya na ntụpọ ya.
Nyochaa Sistem smart ọkà okwu 5
Como siempre Anyị na-akwado ka ị buru ụzọ gafee nyocha vidiyo anyị, N'ime ya, ọ bụghị naanị na ị ga-ahụ ọhụụ, kamakwa ihe usoro nhazi ahụ bụ, otu o si ada na ihe ọ dị ka ọ dị ndụ. Na mgbakwunye, ị nwere ike ịdenye aha ma nyere aka na Actualidad Gadget community ka ọ na-eto eto ka anyị wee na-ewetara gị ngwaọrụ ndị kachasị amasị gị n'ahịa n'akụkụ niile. Nke mbụ, ọ bụrụ na ịlele vidiyo ahụ ikpebiela, ị nwere ike ịgafe ebe a iji zụta ya.
1 Nzube na ihe: Minimalist na compact
3 Ntọala na ọrụ ndị ọzọ dị ka Alexa
4 Qualityda olu na functionalities
Nzube na ihe: Minimalist na compact
O doro anya na anyị na-amalite na imewe. N'akụkụ a, Energy Sistem kpebiri ịgbaso otu akara akara ya «Smart Ọkà Okwu» nso, nke dị ka ị maara nke ọma site nyocha gara agaHa niile na-eso otu isiokwu yiri nke dị larịị, ntakịrị ntakịrị aghụghọ na acha ọcha na acha anụnụ anụnụ. Na na na na na na na na na na na na na na. Anyị nwere ngwaahịa na-egosi ihuenyo LED n'ihu ebe anyị ga-enwe ihe ngosi ma gosipụta oge, ọ bụ ihuenyo Ọhụhụ dị elu dị elu na ụkpụrụ siri ike, na anyị nwekwara ike gbanyụọ. Anyị nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na anyị ejiri ihe mkpuchi zuru ezu nke ga-ekwe ka ụda ahụ pụta, ebe akụkụ ya na-acha ọcha na-acha ọcha yana azụ. N'ime akụkụ azụ a, anyị nwere ọdụ ụgbọ mmiri USB 5v-2A, njikọ 3,5mm Jack yana ọdụ ụgbọ mmiri na-abanye.
Akụkụ: X x 200 136 100 mm
Ibu ibu: 1,33 n'arọ
Ime anwansi na-abata na ogwe elu ya ọcha. Anyị nwere n'ime ya Qi na-akwụ ụgwọ Ikuku nke na-enye 5W nke ike, dị mma iji zere imebi batrị na ebubo abalị. Anyị nwekwara ebe a ọtụtụ bọtịnụ ga-enyere anyị aka ịhazigharị ma hazie Wake Up. Anyị na-eche ihu na ngwaọrụ ọ bụ ezie na ọ bụghị ìhè (maka ndị na-ekwu okwu), ee, ọ bụ kọmpat na-atụle ego nke ngwaahịa n'otu. Nke a, gbakwunyere na nhazi ya, na-eme ka ọ dị mma na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ tebụl ọ bụla n'echiche m, ị naghị eche?
Oge erugo ikwu banyere nkọwa ọrụaka dị ọcha nke a Kulie, O doro anya na anyị nwere ọtụtụ ngwaọrụ n'ime naanị otu, dịka anyị kwuworo na mbụ, ya mere, ọ dị mkpa ka anyị kọwaa nkebi ya ọ bụla iche: +
Echere m na anyị ahapụghị ihe ọ bụla, na nkenke anyị nwere: Ihe chaja 5W Qi, sistemụ stereo 10W nke nwere sistemụ Bluetooth na WiFi, airplay na Spotify Jikọọ na ndakọrịta, chaja ọkọlọtọ ọkọlọtọ na elekere mkpuchi standalone dakọtara na Alexa (dị ka ndị ọzọ nke set). Eziokwu bụ na ọ na-esiri m ike ikwere na ihe ndị ọzọ dabara na obere oghere. N'ezie, otu n'ime ụdị ole na ole gbalịrị ịmalite ihe yiri ya bụ Amazon na nsụgharị ọhụrụ ya bụ Echo Dot nke na-agụnye elekere anya.
Ntọala na ọrụ ndị ọzọ dị ka Alexa
Anyị na-amalite na nhazi mbụ, maka nke a Ọ dị oke mkpa na anyị ga - ebudata ngwa ngwa Sistem Multiroom Wi-Fi (iOS / android). Nke a bụ ebe anyị ga-eji ngwaọrụ maka oge mbụ, na-ejikọ ya na netwọk WiFi anyị ma na-agbanwe ụfọdụ ngalaba. Anyị agaghị enwe ike ịga n'ihu na-eji ya mgbe niile, ọ bụ ezie na ekwesighi ịhichapụ ya. Ozugbo n'ime mmekọrịta usoro na ohere nke na-agbakwunye na ngwaọrụ bụ fọrọ akpaka. Ozugbo ị nwetala netwọọdụ WiFi anyị Anyị ga-abanye na Amazon iji jikọọ ya na Alexa na anyị nwere ihe niile njikere.
Site na oge a, anyị nwere ezigbo ọkà okwu nwere Alexa, Ya mere, ọ nwere ike ịga iwu anyị na-emebu dịka njikwa ngwaahịa na ngwa ngwa ụlọ ma ọ bụ naanị kpọọ egwu na Spotify na mmasị anyị. Ọ bụ ezie na Alexa anyị ga-enwe ohere ịnweta Spotify, ana m akwado iji ngwa Multiroom WiFy mee ka ọ nweta ohere na Spotify Jikọọ ma si otú a zere nsogbu ndị nwere ike. Ọwọrọ Ọ bụrụ na ị bụ onye iPhone, Mac ma ọ bụ iPad onye ọrụ, ị ga-enwe ike ịkpọ egwu ozugbo site na protocol AirPlay nke na-arụ ọrụ na nke a na ngwaọrụ ndị ọzọ nke Energy Sistem Smart Ọkà okwu dị nso. Ọ bụrụ na anyị họrọ Bluetooth, anyị nanị pịa bọtịnụ nke akara atọ nọchiri anya ya, anyị ga-enweta njikọta Bluetooth ma ọ ga-apụta ozugbo na ndepụta anyị.
Qualityda olu na functionalities
Ọ bụ elekere mkpu, echefula ya, ọ bụ ya mere o ji baa uru nwere bọtịnụ abụọ ga-enye anyị ohere ikenye ọbụna mkpu abụọ dị iche iche. N'otu ụzọ ahụ, anyị nwere "ọnọdụ abalị" nke na - egbuchi ihuenyo na ọbụnakwa gbanyụọ ya ma ọ bụrụ na anyị chọrọ. Mgbe Alexa nọ n'ọrụ, akara ngosi ya na-enwu n'akụkụ aka nri nke ihuenyo ahụ, yabụ anyị ga-ama ma anyị nwere ike ịrịọ. Ndị a bụ ụfọdụ n'ime ihe ndị anyị nwere ike ịme:
Gee egwu na Spotify na nyiwe ndị ọzọ dịka Amazon
Jụọ Alexa ka ijikwa mkpu anyị (ma ọ bụ jiri aka ha jikwaa ha)
Rịọ Alexa ka ịkpọte anyị na redio ma ọ bụ abụ a kapịrị ọnụ
Bilie n'usoro Ọkà okwu Smart site na Sistem Energy O juru m anya site n'ịbụ ndị e ji okwu okwu sterio abụọ na-ada ụda nke ọma, nke na-ada ụda ma doo anya, nke nwere ike jupụta ime ụlọ abụọ. Ikekwe o nweghi oke ikuku ndị a, mana anyị agaghị echezọ ma nha ya na eziokwu ahụ na ọ ga-adị na tebụl akwa anyị, yabụ bass dị ike nwere ike ime ka ihe anyị kwụrụ, yana ngwaọrụ mkpanaka daa mgbe anyị na-akwụ ụgwọ ya. N'okwu a, chaja Qi juru m anya, ike ya 5W dị mma iji na-akwụ ụgwọ ya kwa abalị na-enweghị kpo oku ma ọ bụ mee ka batrị ahụ taa ahụhụ, I nwekwara uzo ozo icho ya na USB nke ya ma oburu n’acho.
Ntọala Qi nwere ụdị ọrụ dị oke mkpa yabụ ịtụkwasị ekwentị na ya agaghị abụ nro. Ọwọrọ inwe igwe okwu abụọ Alexa na-eme nke ọma ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọnọdụ ọ bụla.
Akụrụngwa na imewe ya na usoro nke ndị ọkà okwu nwere ọgụgụ isi, obere ihe ma dịkwa mfe itinye
Ọnụ ọgụgụ nke arụmọrụ nke otu ngwaọrụ nwere
Ọnụahịa dị ala karịa nke ngwaahịa niile iche iche
Spotify Jikọọ, Alexa, airplay, Bluetooth 5.0 ... onye na-enyekwu ihe?
A na m atụ uche ngwa ngwa site na USB
Nwere ike ịdị mma maka ụfọdụ tebụl kọfị
Gaa dị ala, ọ bụ ezie na a ghọtara ihe kpatara ya
Na nkenke ahụmahụ m Site na Smart Smartphone Wake Up si Sistem Energy ekwesịrị m ịsị na ọ dịla mma. Soundda dị mma zuru iji mejupụta ime ụlọ n'ụzọ dabara adaba, imepụta na ihe ndị ahụ na-aga nke ọma yana nnukwu arụmọrụ nke ha nwere mere ka ọ bụrụ ngwaahịa na-atọ ụtọ. N'ikwu eziokwu, ọ na-esiri m ike ịchọta isi ihe na-adịghị mma ebe ọ bụ na enweghị ngwaọrụ iji jiri ya tụnyere. Itinye ụfọdụ mana m ga-asị na m na-atụ uche ngwa ngwa odori site USB. Ihe m ji n'aka bụ na ọ bụrụ na ị zụta chaja Qi, okwu okwu stereo na Alexa, Spotify Jikọọ na AirPlay na elekere mkpuchi dị iche iche ọ ga-efu gị karịa € 79 nke Smart Ọkà okwu a na-esi na Energy Sistem na-akwụ ụgwọ ma na ya ukara website dị ka ozugbo na njikọ a, Na mgbakwunye, ị ga-ahụrịrị ihe na-atọ ụtọ na Black Friday, Cyber ​​Monday na Christmas.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Smart Ọkà okwu Tetanụ: Elekere mkpuchi, ọkà okwu nwere Alexa na Qi chaja
Elekere oti mkpu a emezubeghị ihe m tụrụ anya ya, ọ bụghị igwe elekere amamịghe mara mma, ọ bụ elekere mkpu na Alexa, ihe mkpuchi okpu.
Na ngalaba elekere mkpu, ọ bụ ihe nzuzu na ngwaọrụ na-etinye Alexa enweghị ike iji ya rụọ ọrụ na Alexa, mmụọ mmụọ bụ iji rụọ ọrụ ngwaọrụ naanị olu ya yana na ị gaghị emetụ bọtịnụ aka, enwere m elekere mkpuchi nwere ọgụgụ isi na m gbanyụọ, gbanye ma ọ bụ gbanyụọ ihe ngosi, mee ka ọ rụọ ọrụ ma ọ bụ gbanyụọ mkpu, gbanye redio, belata ma ọ bụ bulie olu ya, gbanye ma ọ bụ gbanyụọ ọkụ ọ na-eweta, ọ na-ejekwa ozi dị ka oriọna, wdg, wdg naanị Alexa na anaghị m agbanye ọkụ iji hụ bọtịnụ Ọ bụ elekere mkpuchi dị mfe, anaghị m eji elekere mkpu nke Alexa n'ihi na ọ bụrụ na wifi gafere ọ gaghị akụ ma enwere m nsogbu na ụlọ ọrụ maka ịrụzi na abalị na ịcha ịntanetị ma yabụ gbanyụọ Alexa.
Na ngalaba Alexa ọ naghị eso ya, ọ kwadoghị Spotify, ọ bụrụ na ịchọrọ ịge ntị ka ị chọpụta ya, ị ga-arụ ọrụ ya na mkpanaka gị ma nyefee ụda ahụ na ngwaọrụ achọpụtara dị ka wifi ọkà okwu ma ọ naghị ekwe ị hazie akaụntụ Spotify gị ọzọ ịchọrọ mmekọrịta nke anụ ahụ site na akụkụ nke onye ọrụ yana ọdịda ọzọ dị mkpa bụ na ọ kwadoghị ịhazi ya na multiroom iji gee otu ihe ahụ na alexas niile ị nwere, ọdịda ọzọ na-adịghị mkpa.
Na nkwukọrịta ngalaba nke Alexa ọzọ fiasco, ọ naghị ekweta nkwukọrịta, ya bụ; Younweghị ike ịkpọ oku na ngwaọrụ ndị ọzọ Alexa, ma ha bụ nke gị ma ọ bụ kọntaktị gị, ma ọ bụ dobe ya, yabụ ị ga-echezọ banyere ọrụ intercom ahụ.
Onaghi enye gi ohere ikwuputa okwu gi nile, enwere m mgbam ume gbakwunyere na ulo, nnabata ihe omumu n'ime ihe omumu, nkuzi mgbughari na kichin na onu ahia nwa m nwanyi ma obu oru M na-eji ọtụtụ ihe ka ọ dị ka ụda ozi niile.
Ọnọdụ izu nro anaghị arụ ọrụ na ngwaọrụ a, ọ na - agwa gị na a na - arụ ọrụ ma ọ bụrụ na okwu ole na ole na - eme ka ntị chiri gị, ọ naghị ada ụda n ’ọ bụ ezie na ọ na - agwa gị na agbanyere ya yana nke ahụ dị mkpa maka ihe ga - eme o yikarịrị ka ọ ga-adị n'ime ime ụlọ, bụ Alexa nke dị ka ihe ngosi nke mbụ.
Na mpaghara ụda, ọ na-ezute ezigbo bass na-enweghị mgbagha, chaja ikuku na-agba ọsọ ngwa ngwa maka ekwentị ndị na-akwado ya.
Enweghị m mmasị na ya dị ka elekere mkpu ma ọ nweghịkwa mmasị na m nwere Alexa, ọkachasị dịka ọ bụ na ebe ọ na-eweta nsụgharị dị oke oke, anaghị m akwado ịzụta ya ma ọlị.